Momba ny P&M → Volavolan-tsoratry ny solosaina matihanina • Ambongadiny
Ny fanandramana miaraka amin'ny matihanina
Ny efitrano fanjairana P&M dia natsangana tamin'ny 1995 tao Rawa Mazowiecka. Nanomboka tamin'ny 2003. manome serivisy fanjairana, fanapahana, fanoratana ary fanoratana izahay. Manolotra ambongadiny ihany koa ny akanjo miasa sy fanaovana doka.
Ny mpiasanay tena mahay dia mirehareha amin'ny traikefa an-taonany maro, faly izy ireo manampy sy manome torohevitra amin'ny famolavolana sy ny fisafidianana ny teknika tsara indrindra marika - hanao fandaharana rehetra izahay!
Manana motera milina midadasika sy maoderina sy feno izahay, izay misy:
Masinina lockstitch misy fitaterana ambany - milina mandeha ho azy
Masinina lockstitch misy fitaterana ambany sy ambony miaraka amina fandrantsanana lehibe - milina mandeha ho azy
Hatrana fanjaitra roa
3, 4 sy overlapes kofehy 5
4-fanjaitra sy milina fanjaitra 12-endriny vita mety manjaitra eo amin`ny lotra
Ny latabatra vita amin'ny vy amin'ny mpamokatra setroka
Manapaka latabatra efitrano misy mpipafika 8,5 m miaraka amina antsy ary misy antsy tarika
Izahay dia miahy ny kalitao avo indrindra amin'ny vokatra
Ny efitrano fanjaitra ataonay dia manome antoka fa ny vokatra vokarintsika dia vita amin'ny lamba faran'izay ambony indrindra sy ny haitao ilaina indrindra ary ny teknolojia fandokoana sy famaranana mandroso indrindra. Azontsika atao ny mihaona amin'ireo mpifaninana mitaky mafy indrindra amin'ny alàlan'ny fampiasana mahomby ny fitaovana arahinay. Manana traikefa be dia be amin'ny fanjaitra, fanapahana ary famolavolana ireo masoivoho dokambarotra sy marika malaza isika.
Ny mpanjifa no tena manan-danja anay
Ny mpanjifa nahafa-po no laharam-pahamehana. Ny tolo-kevitr'izy ireo tsara dia manentana antsika hatrany hamolavola sy hitahiry ny kalitaon'ny serivisy ataontsika.
Ny akanjo sy ny dokambarotra akanjo
Manana sakany maro isika - vokatra 6000 mahery, workwear i dokam-barotra avy amin'ireo mpamokatra ekena amin'ny vidiny tena manintona. Anisan'izany ny sweatshirts, satroka, akanjo, lobaka, volon'ondry, lobaka polo, T-shirt, akanjo fiasana, akanjo manokana, akanjo fitsaboana, fivarotana mangatsiaka sy vata fampangatsiahana ary kiraro isan-karazany.
Fanaka-bato / lambam-borona ny solosaina
Orinasa natoky anay
Fandraisana an-tsary / fanonta eo amin'ny akanjo